Shirka Maalgashiga Soomaaliya Oo Magaalaada Dubai Ka Socda
Magaalada Dubai oo ah magaalada ugu ballaaran uguna bulshada badan Dalka Imaraadka carabta ayaa waxaa manta ka furmay shir looga hadlaya maalgashiga iyo fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya.
Shirkan maalgashi waxaa soo qaban-qaabiyay Madasha Dhaqaalaha Soomaaliya (Somali Economic Forum) oo ah hay’ad caalami ah oo madax banaan kana shaqeysa hormarinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo ganacsiyada sida gaarka ah loo leeyahay. Waana markii afaraad oo ay qabaneyso kulan noocaan oo kale ah.
Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga & Hormarinta Dhaqaalaha, Jamaal Maxamed Xasan ayaa kamid ah madaxda shirkaas kasoo qeyb gashay, waxuuna la hadlay dhammaan shirkadahii kasoo qeyb galay isagoona ku dhiirageliyay in ay dalka maalgeshtaan.
Shirkadaha ajaanibta ah ee sidoo kale kasoo qeyb galay waxaa kamid ah shirkadda SKA oo horay u maamuli jirtay garoonka diyaardaha ee Aadan Cadde iyo shirkadda Soma Oil and Gas oo horay heshiisyo ula gashay dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhanka kale shirkadaha Soomaalida ah ee ka qeyb galay madasha looga hadlaya maalgashiga Soomaaliya waxaa kamid ah shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo shirkadda Has Petroleum.
Ujeedada shirka ayaa ah:
In indhaha caalamka lagu soo jeediyo Soomaaliya
In dalka maalgashi loo helo
In fursadaha maalgashi lala wadaago shirkadaha ajaanibta ah iyo kuwa Soomaalida ahba.
Xasan Muuse Bide oo ah mareeyaha Somali Economic Forum (SEF) oo ku sugan magaalada Dubai oo ay Goobjoog Business weydiisay waxa shirkan uu kaga duwanyahay shirarkii hore ee ay qaban jirtay SEF ayaa ku jawaabay “Waxuu kaga duwanyahay, shirkadaha sanadkan kasoo qeyb-galay oo ah shirkado horay wadankii horay u maalgeliyay oo tusaya shirakahan cusub ee hada meesha nagala soo qeyb galay in Soomaaliya ay tahay meel la maalgeshan karo. Waxaa iyadana muhiim ah oo uu kaga duwanyahay kuwii hore inagoo maanta nasiib u yeelanay in aan helno Wasiirkii Maalgashiga iyo Dhaqaalaha Soomaaliya oo runtii wax badan ka hadlay oo qaarkood dhiirogelineysa dadka ajnabiga ah in ay dalka yimaadaan oo dowladana ay dhiirrogelineyso”
Maareeyaha SEF oo wax laga weeydiiyay sababta keentay in dalka dibaddiisa ay ku qabtaan shirkan ayaa sheegay in marka ay muhiimtahay in dunida loo tago oo lala wadaago fursadaha dalka ka jira si dunida ay u yimaadaan Soomaaliya. Dhanka kale Mr. Xasan Muuse Bide ayaa sheegay in sanadka soo socda ay shirkan ku qaban doonaan dalka gudahiisa.
Shirkan ayaa lagu wadaa in caawa lasoo gaba-gabeeyo iyada oo casho sharaf loo sameyn doono shirkadaha Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ah ee kasoo qeyb galay.